Magacyada amiiradaha Disney: ogow taariikhdooda | I sii wakhti firaaqo
Waxaa jira adduunyo sixir ah oo aan la kulannay ficil ahaan tan iyo markii aan dhalanay: Waxaan ula jeedaa adduunka Disney iyo jilayaasha tirada badan ee laga abuuray hareeraheeda. Waa lama huraan in lala xiriiriyo istuudiyaha qalcado la sixray, khiyaal, adventures iyo dabcan: boqoradihii caadiga ahaa. Baro dhammaan Princesses -ka Disney iyo taariikhdooda maqaalkan oo dhan. Amiiradaha Disney waxay matalaan xaraashka ugu qiimaha badan ee Shirkadda Walt Disney.
Waxaan leenahay daraasiin filimaan karti leh kuwaas oo jilayaashoodu ay yihiin gabdho dhallinyaro ah oo qurux badan oo leh sheekooyin kala duwan oo na baraya qiyamka sida saaxiibtinimada, geesinimada, naxariista, madaxbannaanida, ixtiraamka ragga kale iyo dagaalka jacaylka dhabta ah, si aan u xusno dhowr tusaalooyin. In kasta oo ay jirto dood ku saabsan fasiraadda sheeko kasta, haddana ma dafiri karno in sheekooyinkoodu ay yihiin kuwo caalami ah oo ay calaamadeeyeen sannadihii ugu horreeyay nolosha gabdho badan tan iyo bilowgii qarnigii la soo dhaafay. Taasi waa sababta markan jadwalka bilowga waxaa lagu soo bandhigay shaashadda weyn, iyo sidoo kale dib u eegid kooban sheekada istuudiyaha filimku wuxuu go'aansaday inuu sheego.
Sababo ganacsi awgood, istuudiyaha filimku wuxuu u qaybiyaa dhammaan jilaayaashiisa franchise. Amiiradaha Disney waxay bilaabeen 1937 waxayna ka kooban yihiin kow iyo toban xaraf ilaa hadda: Snow White (1937), Cinderella (1950), Aurora (1959), Ariel (1989), Bella (1991), Jasmine (1992), Pocahontas (1995), Mulán (1998), Tiana (2009), Rapunzel (2010) ) iyo Mérida (2012).
1 Cad baraf
12 Aaway inta kale ee Princesses World Disney?
Fue kii ugu horreeyay ee amiiraddii Disney ee daraasaddu keentay shaashadda weyn 1937 taasina waxay metelaysay bilaabista franchise -ka.
Waxaa curiyay Walaalayaal murugaysan, Barafka Cad waa amiirad aad u yar oo leh qalbi weyn: Waxay jeceshahay inay la noolaato dabeecadda iyo xayawaanka waxayna ku noolayd qalcaddii hooyadeed sharka leh oo had iyo jeer dareemi jirtay hanjabaad. Sheekadu waxay soo baxdaa markii hooyada sharka leh ay la tashato muraayaddeeda sixirka oo uu daaha ka rogo in quruxdeeda ay ka sarreysay tii ay dhaleen. Boqoradda xun waxay ku waalataa masayr waxayna go'aansatay inay baabi'iso Barafka Cad si ay dib ugu soo ceshato magaca haweeneyda ugu quruxda badan boqortooyada; wakiilka mas'uulka ahi ma dhammayn karo hawshii loo igmaday wuxuuna kula talinayaa amiiraddu inay cararto oo aanay dib u soo noqon.
Baraf cad ayaa bilaabay safar halkaas oo ay kula kulanto toddoba dwarf oo leh shakhsiyaad aad u qaas ah, isla markiiba waxay noqdaan saaxiibo aad u wanaagsan waxayna go'aansadaan inay ku casuumaan inay la joogto. Wax walba si yaab leh ayay u socdeen, ilaa hal maalin oo xun, boqoraddu waxay ogaatay sariirta gabadheeda oo waxay ka soo muuqatay albaabkeeda iyada oo isu ekeysiisay sidii haweeney waayeel ah oo u baahan oo hal -abuureheennu u damqado. Mahadnaq, iyada oo qayb ka ah qorshe shar ah, haweeneyda waayeelka ah ayaa abaalmarisa dareenkiisa waxayna siisaa tufaax, kaas oo sumoobay. Sidii la filayay, qaniinyadii ugu horraysay gabadhii yarayd way dhacdaa oo waxay ku dhacdaa hurdo qoto dheer oo aanay waligeed ka kicin.
Markay saaxiibbadiis ka soo noqdaan shaqada macdanta, waxay ogaadaan maydka Barafka Cad waxayna daba -galaan haweenayda waayeelka ah, oo dhimata ka dib markii ay ka soo dhacday dhagaxa. Iyaga oo aan ku dhiiranayn in la aaso, toddobadii cagaar waxay go'aansadeen inay saaxiibkooda iyo quruxdeeda ku maamuusaan galaas galaas ah oo ay maalin walba ubaxyo u keenaan. Wax yar ka dib, waxaa soo ifbaxay Amiir Florian oo mar walba jeclaa iyada. Marka uu u soo dhaqaaqo inuu arko saaxiibtiis oo sujuudsan, wuxuu go'aansadaa inuu dhunkado oo hurdada dheer ka toosisa.
Horudhaca filimka ayaa dhacay 1950 -kii dabeecaddana waxaa abuuray Charles been abuur si kastaba ha ahaatee nooca ugu caansan ee sheekada sheekooyinka waxaa daabacay the Walaalayaal murugaysan.
Sheekadu waxay ku saabsan tahay gabadh dhallinyaro ah oo hooyadiis agoon ka ahayd agoonnimo oo uu ku hoos jiray xannaanaynta aabbaheed jeclaa, kaasoo dhintay sannado kadib. Cinderella ayaa ku hadhay gacanta habaryarteed waxaana lagu qasbay in ay daryeesho shaqada guriga iyo in ay qanciso dalabka dadka guryahooda ka shaqeeya. Iyagoo rajaynaya adduun ka wanaagsan, waxay had iyo jeer ku dadaalaysay inay aragto dhinaca ifaya ee nolosha; In kasta oo ay ahayd hawl maalmeedkii adkaa ee guriga, had iyo jeer wuxuu ku hayey ruuxiisa farxad iyo raynrayn buuxda.
Dhanka kale, boqorkii ayaa go’aamiyay in la gaaray waqtigii wiilka keliya ee uu guursan lahaa. Markaa wuxuu kubad weyn ku abaabulay qasriga si uu u doorto xaaskiisa mustaqbalka, dhammaan gabdhihii boqortooyada ayaa loogu yeeray dhacdada. Cinderella ayaa diyaarsatay labiskeedii ugu fiicnaa si ay uga soo qeyb gasho, si kastaba ha ahaatee kuwa tallaabada qaada iyo hooyada sharka leh ayaa burburiyay labiskeeda si ay meesha uga saarto suurtagalnimada ka qeybgalka dhacdada tan iyo markii quruxdeeda ay ka qaaday fursado. Qalbi jaban, waxay bilawdaa inay si qadhaadh u ooyso.
Daqiiqado kadib waxaa soo ifbaxay godadkeedii cirfiid, oo ku qalqaaliya iyada oo u adeegsanaysa sixir iyada oo usha sixirkeeda u beddeshay marooyinkii ay xidhnayd dharkii ugu quruxda badnaa ee ay malayn karto. Mid la mid ah oo la socota dacas muraayado dhalaalaya ah iyo gaadhi -dhaldhalaalaya; si kastaba ha ahaatee sixirku wuxuu ahaa mid ku meel gaar ah wuxuuna dhammaan doonaa saqda dhexe. Sida iska cad, isla marka uu amiirku arko Cinderella oo qolka soo galaysa, wuxuu la yaabay quruxdeeda wuxuuna ku casuumay inay dheesho. Ka dib markii aan ku wareegay hareeraha qasriga oo aan ku raaxeystay fiidkii amiirka soojiidashada leh, Cinderella wuxuu maqlaa laba iyo tobanka subaxnimo oo aan lahayn sharraxaad dheeri ah, wuxuu bilaabay inuu u ordo xagga gaadhigiisa. Amiirku waa ka daba tagaa oo wuxuu isku dayaa inuu joojiyo iyada oo aan ku guulaysan, raadadka keliya ee ka hadhay wuxuu ahaa sibir si kadis ah ugu dhacay intii duulimaadku socday.
Isagoo jacayl u qaba haweeneyda dahsoon, amiirku wuxuu amray in la raadiyo oo wuxuu dalbadaa in addoommadiisu ka raadsadaan boqortooyada oo dhan. Wuxuu codsaday in sibidhka lagu tijaabiyo gabadh kasta oo boqortooyada joogta. Nasiibdarro taxane ah oo ay tahay inay Cinderella soo marto, amiirkii ayaa ugu dambeyntii soo helay oo u soo jeediyay. Tani waa sida jilaagayagu u noqdo amiirad waqtigaas.
Waxaa si fiican loogu yaqaan Quruxda Hurdada, waxay ahayd a Sheekada la soo saaray 1959 -kii oo uu curiyay Charles Perrault oo markii dambe la jaanqaaday Walaalaha Grimm.
Qorshuhu wuxuu ku salaysan yahay inkaar loo tuuray Aurora yar, oo ilmo yar ah, waxaa sixray Maleficent -kii sharka lahaa oo u qaddimay inay amiiraddu ku dhacdo hurdo weligeed ah markay lix iyo toban jirsatay oo lagu muday dunmiiqa giraangirta wareegga. Habaarka waxaa lagu celin karaa oo keliya dhunkashada jacaylka dhabta ah.
Boqorku, isagoo isku dayaya inuu gabadhiisa ka xoreeyo masiibadan oo kale, wuxuu u diray gabadhii yarayd inay la noolaato saddex carwo oo kala ah: Flora, Primavera iyo Fauna. Yaa kor u qaaday Aurora oo abti u ah oo qarisay abtirsiinyadeedii runta ahayd. Subaxdii dhalashadeedii lix iyo tobnaad, carwooyinku waxay u direen Aurora si ay u soo ururiso strawberries si ay u diyaariso keeg waxayna halkaas kula kulantay Amiir Philip oo kaynta ugaadhsanayey, waxay ahayd jacayl aragtidii koowaad waxayna ku heshiiyeen inay mar kale is arkaan.
Aurora waxaa loo kaxeeyay qasriga si loogu dabaaldego dhalashadeeda oo loo sheego runta ku saabsan wixii soo maray, si kastaba ha ahaatee Maleficent ayaa ka dhigtay iyada oo u dirtay meel fog oo ka tirsan qasriga halkaasoo uu ku yaallay giraangirkii ugu dambeeyay ee boqortooyada. Sidii bay wax -sheegiddu u rumowday oo Amiirad Aurora waxay ku dhacday hurdo weligeed ah. Waxay go'aansadeen inay ku ilaaliyaan munaaraddii qalcadda iyaga oo Rose ku saaraya dhabteeda.
Carwooyinka ayaa ku yaal Amiir Philip, markii ay maqleen xanta kulanka kooban ee uu la yeeshay Aurora. Haddana waxaa ku xannibnaa Maleficent si uusan marna u burin karin habaarkiisa. Nasiib wanaag, carwooyinku waxay Felipe ka caawiyeen inuu ka baxsado gacanta Maleficent oo isu beddeshay masduulaagii halista ahaa. Ka dib iska hor imaad adag, amiirku wuu guulaystay ugu dambayntiina wuxuu awooday inuu mar kale la kulmo Aurora si uu u dhunkado oo u leexiyo habaarka.
Gabadha yar ee King Triton, Ariel waa gabadh yar oo nolosheeda badda hoosteeda ay ka buuxday tacabur. Filimkiisa muuqaalka ah waxaa la sii daayay 1989 waxaana dabeecadda abuuray Hans Christian Andersen.
Ballan -qaadkiisii ​​uu ku qabay adduunka badda ka baxsan, qaaday The Little Mermaid si ay u sahamiyaan dusha marar badan isaga oo kaashanaya saaxiibbadiis ugu wanaagsanaa Sebastián iyo Flounder. Mid ka mid ah dhacdooyinkeeda, Ariel waxay goob joog u ahayd duufaan xoog leh halkaas oo shaqaaluhu khatar ku jireen. Halkaas ayay kula kulantay Eric, amiir qurux badan oo ay badbaadisay oo keentay xeebta. Waxay jeclaatay aragtidii koowaad waxayna bilowday inay u heeso. Markuu amiirku u yimid, wuxuu fursad u helay inuu maqlo oo arko wejigeeda; si kastaba ha ahaatee Ariel wuxuu ku qasbanaaday inuu cararo ilbidhiqsiyo kadib markii dad kale ay u soo gurmadeen Eric.
Boqorku wuxuu ka reebay Ariel inuu dib ugu soo noqdo; si kastaba ha ahaatee waxay go'aansatay inay hesho Eric. Taasi waa sababta uu ula dhaqmo saaxirka ugu xoogga badan badaha: Úrsula. Yaa u ballanqaaday inuu u beddeli doono bini -aadam beddelkeeda codkeeda quruxda badan iyada oo hal shuruud ku xidhan: Haddii maalinta saddexaad ee dhulka aanay helin dhunkashada amiirkeeda, Ariel wuxuu ku laaban lahaa badda oo wuxuu noqon lahaa addoontiisa. Mermaid -kii yaraa wuu aqbalay isagoon libiqsanayn wuxuuna u soo baxay dunida dibedda halkaas oo ay si dhaqso ah uga heshay Eric, isla markiiba wuu aqoonsaday wejigeeda wuxuuna weydiiyay magaceeda Ariel. Ma jawaabi karto maadaama aysan cod lahayn. Isagoo niyad jabsan, wuxuu u malaynayaa inaysan ahayn xaaskiisa dahsoon, laakiin si la mid ah, Eric wuxuu bixiyaa hoy waana markaa marka wada noolaanshaha uu soo nooleeyo soo jiidashadii ka soo baxday kulankoodii ugu horreeyay.
Maalintii saddexaad ayay haweeney u muuqataa inay ka heesayo xeebta xeebta, isla marka uu amiirku maqlo, waa la is -qabadsiiyaa wuxuuna go'aansadaa inuu guursado maadaama uu hubay inay tahay haweeneydii naftiisa badbaadisay. Markii uu maqlay warka, Ariel aad buu u murugooday. Saaxiibkiis Scuttle, oo ah seagull, wuxuu ogaadaa in saaxiibtiis mustaqbalka ay dhab ahaantii ahayd Ursula. Markaa wuxuu dejiyaa qorshe uu uga digayo King Triton oo uu ku carqaladeeyo arooska.
Intii lagu guda jiray fadeexad ay jilayeen xayawaanka badda, fiidkii ayaa imanaya iyada oo aan la soo gabagabayn arooska Ariel iyo Úrsula waxay ku laabtaan qaabkoodii hore. Waqtigaas amiirku wuxuu gartaa khaladkiisa wuxuuna isku dayaa inuu badbaadiyo Ariel, si kastaba ha ahaatee waa soo daahay Arielna wuxuu lahaa heshiis ixtiraam. Triton wuxuu dalbanayaa xorriyadda Ariel wuxuuna u soo bandhigaa inuu meelo isaga beddelo. Si farxad leh, saaxirkii ayaa aqbalay oo la wareegay boqortooyadii. Daqiiqado kadib Eric ayaa soo muuqday oo sixray sixiroolaha, kaas oo sababay shil soo afjaraya nolosha addoonkeeda. Cadho, Úrsula way weynaataa weynaataa oo waxay noqotaa qof weyn waxayna keentaa duufaan leh dabayl badda ku jirta.
Eric iyo Ariel ayaa qatar ku jira, laakiin daqiiqad nasiib ah, Eric wuxuu helay markab quusay oo maamula inuu ku dhaqaajiyo qaansada jirka Úrsula, ugu dambeyntiina wuxuu gaaraa geerideeda. Tan, dhammaan habaarkii ay bilaabeen saaxiraddu waa la baabi'iyey oo King Triton mar kale waa la sii daayay. Markii la garwaaqsaday jacaylka dhabta ah ee ay gabadhiisa iyo amiirku lahaayeen, Triton wuxuu Eric u fasaxay inuu guursado gabadhiisa, sidaas darteed ayaa Ariel dib ugu celiyey aadanaha si ay ugu noolaadaan farxad weligeed ah.
Quruxda iyo Bahalka waxaa tiyaatarada la saaray 1991kii waxayna ku salaysan tahay sheekadii ay abuurtay Jeanne Marie Leprince de Beaumont.
Bella waa gabadh aad u caqli badan oo hami leh oo aan ku qanacsanayn waxa dunida ku xeeran ay siiso; Waxay la nooshahay aabbaheed Maurice waxayna la qabatimay akhriska. Gastón waa magaca u doondoonteeda, waa ugaadhsade caan ah oo Bella had iyo jeer diido. Filimku wuxuu bilaabmayaa goor hore, amiir danayste ah waxaa ciqaabaya saaxir duug ah markii uu garto inaysan qalbigiisa ku jirin wanaag: Wuxuu ka dhigaa Bahal wuxuuna sixray dhammaan qalcaddiisa oo dhan, oo ay ku jiraan qof kasta oo ku jira. Sida kaliya ee sixirka lagu jebin karaa waa in qof jacayl lala yeesho ka hor intaan ubax sixirku dhamayn.
Dhinaca kale, Bella aabaheed waxaa lagu qabtaa qalcadda la dabargooyo. Waxay u tagtaa samatabbixintiisa waxayna la xaajootaa bahalka iyada oo xorriyaddeeda ugu beddeshay aabbaheed. Heshiiska waa la xiray oo jilaaga ayaa bilaabaya inuu la kulmo dhammaan sheekooyinka iyo waxyaabaha aadka loo soo dhoweeyo ee saaxiib la noqda. Ka dib markii ay is fahmi waayeen bahalka, Bella waxay ka soo baxsatay qalcaddii. Badhtamaha kaynta waxay kula kulmaysaa yeey gaajaysan oo damacsan inay soo weeraraan, waqtigaas bahalku wuxuu u muuqdaa badbaadinteeda. Dhacdadaas ayaa bilow u ah saaxiibtinimo weyn markii Bella ay ku soo laabatay qasriga oo ay ku raaxaysatay joogitaankeeda.
Dhanka kale tuulada, Maurice wuxuu isku dayayay inuu helo kaalmada lagama maarmaanka u ah badbaadinta gabadhiisa. Si kastaba ha noqotee, kuma qancin karo qof inuu caawiyo ilaa Gastón uu lahaa fikradda ah inuu ku eedeeyo waallida iyo inuu bahdilayo Bella si uu u guursado si uu uga badbaado in aabbihiis lagu xiro isbitaalka dhimirka.
Ku soo noqoshada qasriga, bahalka wuxuu go'aansadaa inuu u habeeyo casho weyn Bella, wuu jeclaaday iyada oo wuu u baahday haddii jaceylkiisa la soo celiyo. Dhamaadka fiidkii, bahalku wuxuu siiyaa Bella si ay aabbaheed ugu aragto muraayad sixir ah waxayna ka heshaa sawir aan wanaagsanayn aabbaheed oo ku jira xaalad aad u adag; si bahalku u sii daayo si ay u samatabbixiso. Wuxuu siinayaa muraayaddii waxayna ka tagtay qalcaddii, iyada oo ka tagtay bahalkii iyo addoommadii oo dhan. Rajadii jabinta sixirka ayaa meesha ka baxday waqtiguna waa sii socday.
Markay Bella hesho aabaheed, waxay u kaxaysaa guriga si ay u daryeesho. Daqiiqado ka dib Gastón ayaa u muuqda dhakhtar ka socda cusbitaalka dhimirka oo Maurice ku eedaynaya waalli, dad badan oo tuulo ah ayaa la socday. Gastón wuxuu bixiyaa dalabkiisa: Gacanta Bella beddelkeeda xorriyadda aabbaheed. Bella way diiday waxayna ku tusaysaa bahalka muraayadda sixirka si loo xaqiijiyo in aabbaheed miyir qabo. Saameynta Gastón, dadka magaalada ayaa go'aansada inay dilaan Bahalka sababta oo ah waxay u arkaan inuu halis yahay. Bella waxay isku daydaa inay ka hortagto baacsashada oo waxay ku xidhan tahay qaybta hoose, si kastaba ha ahaatee waxay maamushaa inay ka baxsato iyada oo ay ugu mahadcelineyso Chip, koob hadal ah oo raacay markii ay ka tagtay qalcadda oo ay dib u qabsadaan safarka dib ugu noqoshada qalcadda si ay uga digaan bahalka.
Dadka deggan qalcadda ayaa garwaaqsan halista ku soo fool leh, waxay faahfaahinayaan qorshe weerar waxayna maamulaan inay ka saaraan dhammaan dadka deggan marka laga reebo Gastón. Wuxuu go’aansaday inuu dilo Bahalkii ay Quruxdu jeclaatay., markaa markuu helo, dagaal weyn baa qarxa. Bella waxay maamushaa inay aragto iyaga marka ay soo gaarto qalcadda oo degdeg ugu istaagto joojinta dagaalka.
Isla markii bahalku mar kale arko Bella, wuxuu dib u helay rabitaankiisii ​​ahaa inuu ku noolaado iyo daqiiqad mashquulsan, Gastón ayaa gadaal ka weeraraya, isagoo soo saaraya boog dilaa ah. Waqtiyada soo socda, Gastón wuu dhintaa markii uu ka soo dhaco mid ka mid ah munaaradaha qalcadda. Bella waxay u ordaa si ay u caawiso Bahalka oo marka ay qirto jaceylkeeda, ayuu miyir beelay Bellana aad bay u ooyday. Ilbidhiqsiyo kadib, roob iftiin ah ayaa bilaabmaya in yar oo bahalkii uu u rogo nin qurux badan, Bella ayaa isla markiiba garatay waxayna jacaylkooda ku shaabadeeyeen dhunkasho. Sixirkii wuu jabay oo dadkii degganaa oo dhan ayaa mar kale dad noqday.
Iyadu waa jilaaga caanka ah film aladdin, oo la sii daayay 1992, sheekadii asalka ahayd waxay ka mid tahay buuggii Kun iyo Habeenkii Asal ahaan ka soo jeeday Suuriya oo uu tarjumay Antoine galland.
Jasmine waa amiiraddii magaalada Agrabah, waxay dareentaa in ay ku xiiqday nolosha oo ay ka buuxaan xannibaadyo ay ku jirto booskeeda boqornimadu, sidaa darteed waxay go'aansatay inay ka baxsato qasriga iyada oo u labisan sidii qof caadi ah. Waxay ku taal mid ka mid ah socodyadaas halkaas oo uu kula kulmo Aladdin, tuug dhallinyaro ah oo saaxiibkiis ugu fiican yahay daanyeer. Waxay wada qaateen galabtii wayna wada hadleen ilaa ay is barteen, galabtii dhammaadkeedii Aladdiin waa la xiray. Amiiraddu waxay muujisaa aqoonsigeeda waxayna dalbataa in la sii daayo saaxiibkeed, si kastaba ha ahaatee saraakiishu waxay raaligelin ka bixinayaan iyagoo sheegaya inay yihiin amarro toos ah oo ka yimid Jacfar oo aan la caasiyi karin. Jasmine waxay isla markiiba u tagtaa Jacfar si ay u dalbato in la sii daayo Aladdin, si kastaba ha ahaatee Jacfar ayaa been u sheegta oo sheegaysa in la dilay.
Aladdin wuu baxsaday waxaana loo diray hawlgal halkaas oo uu ka helayo laambad sixir ah iyo roog duulaya. Laambaddu waxay qabatay halyeey siiya sayidkiisa saddex rabitaan. Markaa wuxuu go'aansaday inuu ka daba tago gacalisadiisa Jasmine wuxuuna rabaa inuu amiir noqdo. Genie wuxuu bixiyaa rabitaankiisa sidaa darteed wuxuu fursad u helay inuu ka soo qeybgalo qasriga si uu u soo jiito amiiradda oo uu u helo fursad uu ku guursado. Socod jaceyl kadib Jasmine way aqoonsataa isaga oo Aladdin wuxuu sharxayaa inay iyaduna u isticmaasho inay u labisato sida dadka caadiga ah si ay nolosheeda uga baxsato.. Way is jeclaadaan waxayna go'aansadaan inay is guursadaan.
Markii Jacfar uu helay laambadda sixirka, wuxuu daahfuray Aladdin saaxiibkiis wuxuuna qabsaday magaalada: wuxuu qabsaday suldaankii iyo amiiraddii wuxuuna muujiyey aqoonsiga dhabta ah ee Aladdin. Ugu dambayntii sharwaduhu wuxuu noqdaa genie -ka ugu awoodda badan koonkan iyada oo uu rabo rabitaankiisa waxaana lagu xiraa laambad sixir ah iyada oo loo maro dabin. Amiiraddu waxay aakhirkii awood u leedahay inay dib ula midowdo gacaliyaheedii Aladdin waxayna helaan oggolaanshaha suldaanka inay guursadaan.
Iyadu waa amiiradda kaliya ee asal ahaan ka soo jeeda qowmiyadda Mareykanka. La sii daayay daraasadda 1995 waxaana abuuray Glen Keane.
Waa gabadh dhallinyaro ah oo leh ruux xor ah oo xoog badan. Iyadu waa curadkii ugaaska qabiilka waxayna tan iyo carruurnimadeeda ku hawlanayd dagaalyahan muhiim ah oo la odhan jiray Kocoum; si kastaba ha ahaatee marna uma dareento jaceyl dhab ah isaga.
Markay dadka deegaanku yimaadaan tuuladiisa, wuxuu la kulmaa John Smith, kaas oo uu la bilaabo saaxiibtinimo kadibna dareenkiisu sii qoto dheeraado. Marka gabadha aroosadda ah ay ogaato xaaladda, wuxuu John kula tartamaa ciyaar uu Kocoum ku dhinto. Qabiilku wuxuu qaadaa John maxbuus oo wuxuu ku xukumay dil.
Pocahontas waxay gacaliyaheeda ka badbaadisaa dil, si kastaba ha ahaatee jaceylkeedu ma sii socon karo maadaama John Smith ay tahay inuu London tago oo aysan raaci karin. Jaceylkoodii waa hakaday oo nabadeey.
Wuxuu ka soo muuqday shaashadda weyn 1998, Waa haweenay geesi ah oo asal ahaan ka soo jeeda Aasiya iyo in kasta oo aysan lahayn magac boqornimo, haddana waxaa loo dallacsiiyay darajada amiirad iyada oo ay ugu wacan tahay waxqabadkii weynaa ee dalkeedu gaadhay.
Shirqoolku wuxuu soo ifbaxayaa intii lagu jiray dagaal ay ahayd in qoys walba uu nin u diro dagaalka. Dhanka kale, Mulan wuxuu ku jiray tababar si uu u noqdo xaas mustaqbalka ku dayasho mudan. Ma aysan ku faraxsanayn masiirkeeda qaddarinta waxayna go'aansatay inay ka baxsato guriga si ay u caawiso dadkeeda dagaalka. Wuxuu iska dhigaa inuu yahay labka qoyskiisa wuxuuna bilaabayaa diyaarinta dagaalka.
Dib -u -dhacyo badan ka dib, waxay aakhirkii heshay xirfadihii lagama maarmaanka u ahaa iyada oo u mahadcelineysa iyada iyo xeeladeeda, waxay u maareeyaan inay ku guuleystaan ​​dagaalka iyo waxay ka hortagtaa geerida Emperor. Dadku waxay aqoonsadaan ficiladeeda geesinimada leh waxayna xusaan iyada oo u soo bandhigtay xil muhiim ah oo ka tirsan ciidanka, taasoo ay diiday inay ku noqoto reerkeeda.
Iyadu waa jilaagii filimka Tiana y el Sapo, oo la sii daayay 2009. Waxay ku sifowday inay tahay amiiraddii ugu horreysay ee midabka ee adduunka Disney dhexdeeda. Waxay ku salaysan tahay buugga ay qoreen ED Baker iyo Brothers Grimm.
Tiana waa gabar yar oo kabalyeeriye ah oo ku riyoonaysa inay mar uun yeelato makhaayad u gaar ah, waxay maanka ku haysay meel ku habboon. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu ogaaday in meesha ay ku dhowdahay in laga iibiyo qandaraasle aad u wanaagsan oo dhalanteeddiisii ​​la burburiyay.
Waxay ahayd meesha uu kula kulmay Amiir Naveen, oo isu rogay toad si uu u hoggaamiyo nolol buuxda, taxaddar la'aan iyo caajis. Amiirku wuxuu ilaalin doonaa foomkaas ilaa uu dhunkasho ka helo, sidaa darteed wuxuu ku qanciyaa Tiana inuu dhunkado isagoo ku beddelanaya inuu siiyo qayb ka mid ah hantidiisa si uu u gaaro riyada ah inuu noqdo milkiilaha maqaayaddiisa. Way aqbashay laakiin qorshuhu wuu khaldamayaa iyo Tiana waxay ku dambaynaysaa sidoo kale inay noqoto ambiibiyaan, sidaa darteed labadooduba waxay tagaan tacabur iyagoo raadinaya wadaad voodoo ah si ay u codsadaan caawimaaddeeda.
Safarku wuxuu ahaa mid casharro nololeed ka buuxay waxayna ku dhammaadeen jaceyl shaqsiyadeed sidaas darteed waxay go'aansadeen inay is guursadaan, xitaa qaabkooda toad. Waxaa la yaab leh, iyagoo guurkooda ku shaabadeeyey dhunkasho, labada jilaa waxay ku noqdaan inay noqdaan dad oo Tiana waxay noqotaa amiirad.
Tangled, waa cinwaanka filimka uu ku jilayo oo la sii daayay 2010. Wuxuu ku salaysan yahay mid ka mid ah sheekooyinka ay sameeyeen Walaalaha Grimm. Waa filimkii ugu horreeyay ee amiirad Disney kombiyuutar lagu soo saaray animation 3D.
Rapunzel waxaa lagu gartaa timaheeda timo cad oo dhaadheer. Sheekadu waxay ka sheekaynaysaa dhalashadeedii iyo damaashaadkii ay boqorradu ku sameeyeen sharafteeda, si kastaba ha ahaatee waxaa afduubtay oo korisay sharta Gothel oo iyada maxaabiis ahaan ugu haysay munaarad si ay uga faa'iidaysato awoodaha sixirka ah ee timaheeda ku jira. Muddo 18 sano ah, amiiraddu waxay ku hoos noolayd aaminsanaanta in Gothel ay tahay hooyadeed iyo in dunida dibeddu ay aad khatar u tahay.
Dhanka kale qalcadda ayaa dhac lagu sameeyay, mid ka mid ah tuugada ayaa cararay oo helay magangal halkaas oo Rapunzel laga qariyey adduunka. Wuxuu go'aansaday inuu fuulo munaaradda, markaas ayay amiiraddu dib u dagaallantay oo ay miyir beeshay. Markii dambe, waxay urursataa xooggii ay ku aadi lahayd dunida dibedda, waxay ogaataa runta waayihii hore waxayna jeclaatay tuuggaas oo la odhan jiray Eugene oo ay aakhirkii guursatay.
Jilaaga filimka Indomitable, Merida waa gabadh yar oo timo cas ah oo sheekadeeda uu sameeyay Brenda Chapman kuna qotomisay Scotland qarniyadii dhexe. Waxaa soo saaray Pixar iyo Disney.
Dabeecaddeeda deg -degga ah ayaa ku dhiirri -gelinaysa inay rabto inay iyadu go'aansato nolosheeda tan iyo markii waalidkeed ay u ballan -qaadeen guurkooda wiilka mid ka mid ah xulafadeeda, daaweyn Mérida diidey oo khalkhal ku abuurtay boqortooyada sababtuna tahay caqabadda dhaqanka. .
Amiiraddu waxay caawimo ka raadsataa haweeneey waayeel ah oo ay la xaajooto si ay masiirkeeda ugu beddesho sixir, taas oo u beddelaysa orso. Iyaga oo kaashanaya hooyadood, waxay raadiyaan inay sixirka dib ugu celiyaan iyagoo soo maray dhacdooyin taxane ah oo Mérida ka dhiga inay bartaan qiyamka ugu muhiimsan nolosha.
Sheekada Merida way ka duwan tahay tan inta kale ee boqorada Disney, kuma koobna jacaylka ay u qabto amiir. Halkii, waxay ka sii hadlaysaa xiriirka walaaltinimo ee ka dhexeeya walaalaha iyo waalidka, si la mid ah waxay wax uga qabataa arrimaha hadda jira sida dareenka madaxbannaanida iyo kacdoonka ay dhallinyaradu muujin karaan.
Sababtoo ah sheekooyinku wali waa ansax yihiin, Disney waxay go'aansatay inay dib u bilawdo noocyadii ficilka tooska ahaa iyada oo guul weyn leh: Cinderella 2015 iyo Quruxda iyo Bahalka 2017. Waxaa la shaaciyey in noocyada Aladdin iyo Mulan la sii dayn doono sannadaha soo socda.
Aaway inta kale ee Princesses World Disney?
Marka lagu daro Princess -yada Disney ee ka kooban xayeysiiska, waxaa jira kuwo kale oo badan oo leh sheekooyin khuseeya daraasadda. Kani waa kiiska Elsa iyo Anna (Qaboojiyay: boqortooyada barafka), iyo sidoo kale Princess Sofia, Moana, Megara (Hercules) iyo Esmeralda (The Hunchback of Notre Dame). Si kastaba ha noqotee, looma tixgeliyo gudaha xayeysiiska tan iyo markii bilaabistoodu dhowaan ahayd ama aan aad loogu guulaysan, sidoo kale waa sababta oo ah qaar baa leh guul weyn kaligood.
Si kastaba ha ahaatee, waxay u badan tahay in la caleemo saari doono dhawrka sano ee soo socda maaddaama franchise -ku had iyo jeer ku jiro cusboonaysiin joogto ah taas oo ay ka mid tahay dharka ilaa xubnaha cusub.
Wadada buuxda ee maqaalka: I sii wakhti firaaqo » cine » Magacyada Amiiradaha Disney
Filimada cilmi nafsiga